Ciyaaraha Dugsiga Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ciyaartoyda MHS iyo Qoysaska,
Fadlan akhri cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Waxqabadyada & Ciyaaraha MHS ee dusha sare ee bogga cayaaraha fudud kahor diiwaangelinta cayaaraha xilliga qaboobaha.
Iskutallaab - Wiilal Varsity
Wadanka Gudihiisa - Gabdhaha Varsity
Isxilqaan (Tonka Farxad)
Kubadda cagta (waxaa loo wareejiyay guga 2021)
Kubadda - Waa la waafajiyay
Kubadda Cagta - Wiilasha
Kubadda Cagta - Gabdhaha
Xoog & Xaalad
Dabaasha & Quusitaanka - Gabdhaha
Kubbadda Laliska (waxaa loo dhaqaaqay gu'gii 2021)
Basketball - Wiilasha
Basketball - Gabdhaha
Qoob-ka-ciyaarka Tartanka (Skipperettes)
Xeegada Dabaqa - Waa la waafajiyay
Xeegada - Wiilasha
Xeegada - Gabdhaha
Nordic Ski - Wiilal iyo Gabdho
Dabaasha & Quusitaanka - Wiilasha
Bowling - Waa la waafajiyay
Golf - Wiilasha
Golf - Gabdhaha
Lacrosse - Wiilasha
Lacrosse - Gabdhaha
Raad-raac & Goob - Wiilal
Raad-raac & Goob - Gabdho
Cayaaraha Rec-ku waxay u baahan yihiin ballanqaad waqti yar laakiin waa hab madadaalo leh oo lagu joogi karo 'ciyaarta,' ku sii jir tartanka oo qaab ahaan u joog!
Waxaad ka heli doontaa liistada dib-u-bixinta isboortiga ee fasalada 9 -12 boggeena Naadiyada & Kobcinta .
Salaan MHS Ardayda, Qoysaska iyo Taageerayaasha,
Marka hore, waad ku mahadsan tihiin dulqaadkiina iyo dabacsanaantaadii markii aan diyaarinay faahfaahinta sanad dugsiyeedka 2020-21. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho way dhamaatay, laakiin, nasiib daro, ka jawaabida isbadalada maalinlaha ah ee ay keento Covid-19 waxay u badan tahay inay ahaato "caadi" cusub in muddo ah.
Waxaan fahansanahay caqabadaha ardaydeena, barayaasheena iyo tababarayaasheena ay u adkaysteen bilihii lasoo dhaafay. Qaabka ay bulshada MHS oo dhami iskugu soo wada jeesteen uguna kaceen munaasabada waxay ahayd mid laga naxo. Fasalkeena MHS ee sanadka 2020 wuxuu qaaday dhibkii ugu adkaa gugan tagtay, wuxuu kabilaabay u wareegida fasalada khadka tooska ah. Kadib waxaa yimid kansarka niyadjabsan ee cayaaraha guga, dhiirrigelinta, Waayeelka U Adeega, xafladaha bilowga iyo xafladda sare ee habeenkii oo dhan. Fasalkaaga ayaa weligiis lagu xusuusan doonaa adkaysi iyo nimco. Aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan shaqaalaha Dugsiyada Minnetonka, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adiga waana ognahay khibraddani inay kaa dhigi doonto shaqsiyaad xoog badan oo naxariis leh.
Markaan sii wadno isbeddelka 'Covid-19', ku kalsoonow inaan si taxaddar leh uga shaqeyneyno xafiiska waxqabadyada MHS si loo hubiyo in arday kasta-ciyaartooygu leeyahay sanad-dugsiyeed la xusuusto 2020-21, si kastaba ha noqotee taasi way eegi kartaa. Waxaan fahansanahay muhiimada howlaha kaqeybgalka ay ka ciyaarayaan tacliinta, bulshada iyo koritaanka shucuureed ee ardaydeena, caafimaadka iyo badbaadada ardaydeena iyo shaqaalaheena ayaa ah mudnaanta koowaad. Waxaan sii wadi doonnaa inaan siino fursado kala duwan oo manhajka ka baxsan iyada oo ay hagayaan Minnesota League High School League (MSHSL). Dhawr habayn ayaa horay u hirgelisay MSHSL, oo ay ku jiraan dib u dhigista kubbadda laliska iyo kubbadda cagta illaa guga. Ciyaaraha dayrta ee dheeriga ah waxay u socon doonaan sidii loogu talagalay, laakiin waxaad arki kartaa xilli la soo gaabiyo.
In kasta oo aynaan ogeyn sida sanad dugsiyeedka intiisa kale u ekaan doono, waxaan sii wadi doonnaa inaan kugula socodsiino iimaylka, degellada degellada iyo barnaamijyada warbaahinta bulshada ( Facebook , Twitter ) maadaama qorshayaashu soo baxayaan toddobaadyada soo socda. Waxa kale oo aad booqan kartaa bogga MSHSL “News” bogga, https://www.mshsl.org/about/news/league-news , wakhti kasta. Fadlan ha ka waaban inaad ila soo xiriirto fikradahaaga ama welwelkaaga.
Waad ku mahadsantahay dulqaadkaaga joogtada ah, dabacsanaanta iyo u heelanaanta ardaydeena. Sannad dugsiyeed aad u wanaagsan iyo GO SKIPPERS!
Agaasimaha Waxqabadka Ardayda
XIRIIRKA & FOOMAMKA
Deyrta 2020 Ku Noqoshada Siyaasadda Ka Qaybqaadashada
Diiwaangelinta Hawlaha MHS
Xafiiska Waxqabadyada MHS wuxuu ubaahan yahay jimicsi isboorti oo hadda socda sanad dugsiyeed kasta kahor diiwaangelinta isboorti kasta. Waxaad ugu soo diri kartaa fakis 952-401-5905 ama emayl ugu dir Jane ama Gwynn midkood:
Jane Mcgowan - Hawlaha MHS Asst.
Gwynn Pletsch - Hawlaha MHS Asst.
Spectatorship way xadidan tahay sanad dugsiyeedka 2020-21 tikidhada lama iibin doono waqtigan. Fall siyaasadaha imaatinka isboortiga ee ku qoran bidixda. Faahfaahin dheeri ah oo soo socota xilliga qaboobaha iyo cayaaraha guga.